Ganacsatada Huteelada Waaweyn Ee Caasimada Oo Khaatiyaan Ka Taagan Caruuro Ku Xoogsada Rabshaddaha - #1Araweelo News Network | #1Araweelo News Network
Ganacsatada Huteelada Waaweyn Ee Caasimada Oo Khaatiyaan Ka Taagan Caruuro Ku Xoogsada Rabshaddaha
Hargeysa (ANN) Dadka gànacsatada àh ee leh Huteeladda Waaweyn ee ku yaal caasimadda Hargeysa, ayaa khaàtiyaàn ka taagan kooxo dhàllinyàro rabshoolàyaal ah, kuwaas oo rabshado ka sameeya xiliyada xafladuhu ka socdaan hudheelada maalin iyo habeenba. Rabshadaha dhallinyaradu sameeyaan, ayaa sababa isku dhac dhexmara shaqaalaha iyo kooxaha rabshadaha ku xoogsada, iyadoo muddooyinkan u dambeeyey ay dhacdo in dhallinyarado xilli hadh cad ah falal nabadgelyo-darro kula kacaan hudheelada. Koox suxufiyiin ah oo booqday Huteelka Crown ee magaalada Hargeysa oo ka mid ah goobaha ugu caansan ee xafladaha lagu qabsado, ayàa xog-ogaal u noqday falal nabadgelyo-darro iyo rabshado kooxo dhallinyaro ah ku hayaan hudheelka. Waxa kaloo suxufiyiintu la kulmeen in dhallinyaradaas rabashado ka sameeyeen albaabka weyn ee laga galo hudheelka, kuwaasoo isku qaybiyey laba kooxood oo khilaaf dhexmaray ilaalada hudheelka, kadibna sameeyey rabshado lagu khalkhalinayo ammaanka hudheelka Crown.
Mulkiilaha Hudheelka Crown oo aqoonsaday qaar ka mid ah dhallinyarada rabshadaha sameeyey oo ka soo jeeda guryaha jaarka la ah hudheelka, ayaa socod ku tagay Aqalka mid ka mid ah da’yarta rabshadaha dhigay si uu waalidkiis uga ashkateeyo dhibaatada lagu hayo hudheelkiisa. Hasayeeshee, waxa inta badan dhacda in qaar ka mid ah waalidiintu difaacaan carruurtooda cabashada laga muujiyo, kuwaasoo ku dooda in aanay wax lug ah ku lahayn rabshadaha lagu eedeeyo, iyadoo arrintaasina dhiirigelin ku beertu dhallinyarada rabshadaha sameeya.
Dhacdadan ayaa muujinaysa sidà ay kooxaha dhàllinyarada ah oo markii hore xiliyada habeenkii arbushi jiray xafladaha lagu qabto huteelada, isla markaana xaafadaha rabshàdo uga sameeya, iyagoo dadka ku baadha habeenkii ay xilligan ugu dhiiradeeen inay maalin cad rabshado iyo weeraro ku qaadaan goobaha ganacsiga, sida hudheelada waaweyn, kuwaàs oo u muuqda kuwo aan waxba iskaga tirinayn ciidammada Booliska, isla markaana aan wax cabsi ah ka qabin waalidintood.